Adimin | Burmese Women's Union
Author Archives: Adimin
August 15, 2018 6:06 am
မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ လေ့ကျင့်ပညာပေးရေးနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့နယ် လောကထုရွာတွင် “ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအသံနားထောင်ခြင်း” သင်တန်းကို ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသမီးငယ် ၂၆ ဦးတို့ ဖြင့်ပြု လုပ်ခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များ၏အသံနှင့် ဖြစ်လိုသည့် အရာများကို နားထောင်ပေးမှု နားလည်ပေးမှု အားနည်းနေပြီး ၄င်းတို့ အတွက် ရင်ဖွင့်စရာနေရာတခု လိုအပ်သည်ဟု မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေဖြင့် သုံးသပ်မိသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ဆယ်ကျော် သက်အမျိုးသမီးများ၏ Read More...
August 15, 2018 5:59 am
From August 11th to 12th 2018, Capacity Building and Participation Program of the BWU conducted two days training for adolescent girls in Lawkahtu village, Loikaw Township, Karenni State. Two trainers from BWU facilitated the training where 26 girls actively Read More...
July 31, 2018 1:22 pm
Download PDF file မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ သတင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဌာနမှ ကောက်နှုတ်စုစည်းသည် မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေး လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်များကို ရေးသားဖော်ပြသော သတင်းများကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ်စုစည်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။ Read More...
Download PDF file မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ သတင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဌာနအနေဖြင့် (၃ )လအတွင်း (၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ မတ်လအထိ) အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေနှင့် ဖြစ်စဉ်များကို ရေးသား ဖော်ပြ သော သတင်းများကို ပြန်လည်ကောက်နှုတ်စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။ Read More...
Burmese Women’s Union(BWU) organized the “Economic Reform Workshop” from 2018 June 15th to 21st in Yangon. The secretaries’ team, all program staffs and invited women from BWU network were participated to this workshop. The group learnt the Monetary policy, Read More...
July 5, 2018 3:48 am
မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေဖြင့် ̏̏ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ̋ ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှ ၂၁ ရက်နေ့ အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းဆရာအဖြစ် ဆရာဦးအောင်သူငြိမ်း (Institute for Stretegy and Policy-Myanmar)မှ လာရောက်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ မှ အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် စီးပွားရေးကဏ္ဍ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုလေ့လာခြင်း၊ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင့်သုံးနေသော Read More...
June 11, 2018 9:28 am
၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ(၁)ရက်နေ့ တွင်ကျရောက်သော ၁၁၈ ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများနေ့ကို BWU နှင့် Famer and Labor Actvitist Group (FLAG) လယ်သမား အလုပ်သမားရေးရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သော Labor Power Group (LPG), Action Labour Right (ALR), Let Help Each Other (LHO) နှင့် Yaung Chi Oo Read More...
BWU ၏ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ကာလ ဒေသအဆင့်အမျိုးသမီးအသံများ တိုးမြှင့်လာရေးအတွက် နယ်မြေအခြေအနေများ လေ့လာသုံးသပ်ရေးခရီးစဉ်
April 20, 2018 6:35 am
မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ BWU အနေဖြင့် ၂၀၁၈ မှ ၂၀၂၀ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း မိမိတို့ ပစ်မှတ်ထားပြီး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်နေသည့်ဒေသများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော လုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ကာ ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် ဒေသအတွင်းရှိ လူထုများ၏ နေ့ တဓူဝဖြတ်သန်းသည့် ၄င်းတို့ ၏လူနေမှု ဘ၀များအတွင်း နေ့ စဉ်လိုအပ်ချက် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများစသည့် အခြေအနေများကိုလေ့လာ တွေ့ ရှိနိုင်ရန်၊ ၄င်း တို့ရင်ဆိုင်နေရသော ပြသနာများနှင့် မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်သည်ဆိုသည်ကို နားလည် သဘောပေါက်လာစေရန်၊ ဒေသခံနှင့်မိမိတို့Read More...